IGAD Oo Soo Dhawaysay Go’aankii Madaxwayne Kiir Ee Banadaynta South Sudan – Heemaal News Network
Ergeyga Gaarka ah ee Urur-gobaleedka IGAD u qaabilsan wadahadalada Koonfurta Suudaan, Danjire Ismacil Wais ayaa soo dhoweeyay go’aankii ay dhowaan dowladda Koofurta Suudaan gaadhay ee dhinaca ismaamul-goboleedka uu dalkaasi ka koobnaanayo kuna ogolaatay in ay dib ugu celiso is-maamul-goboladaas toban.
“Tani waxay muhiim u tahay sameynta Dowlada Ku Meel Gaarka ah oo lagu midaysan yahay iyo hadafkeenna ah in nabad waarta laga dhaliyo Jamhuuriyadda Koonfurta Suudaan,” ayuu yiri.
“Waxaan u hambalyeynayaa hoggaanka Madaxweyne Salva Kiir Mayardit iyo Dowladda South Sudan oo qaatay go’aan geesinimo leh oo u adeegaya danaha dalkaas.”
Ergeyga Gaarka ah wuxuu ugu yeeray qeybaha isku haya Suudaanta Koonfureed inay dhisaan dawlada ku meel-garka ah ee laga sugayo, sidoo kalena ku gaadhaan heshiis kama dambayn ah boqolka maalmood ee la kordhiyay.
Waxa kale oo uu ku booriyay Xisbiyadu inay si wada jir ah u shaqeeyaan muujiyaana niyad wanaag iyo is-afgarad maalmoha yar oo ka haray dhammaadka boqolka maalmood ee nabadgelyada Koonfurta Suudaan.
Hadalkan ka soo yeedhay IGAD ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo maalintii shalay uu hogaamiyaha Mucaaridka Koonfurta Sudan Mr. Mechar ku gacan saydhay qordhaha dawlada ee ahaa in la sameeyo 10 maamil goboleed iyo 3 ismaamul magaalo.
Dayaaradaha Laga Leeyahay Israel Oo loo Ogolaaday Inay Isticmaalaan Hawada Suudaan.